Weight loss ပိန်ချင်သလား – Mawlamyine Daily
Posted on September 20, 2018 by Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
၁။ ဆရာရေ သမီးအသက်က ၃၅ထဲမှာပါ။ ရာသီမပေါ်တာလေးလရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်သည်ပါ။ သမီးပေါင်ချိန်က ၁၈၆၊ အရပ်က ၅ပေ။ ပိန်ချင်တယ်ဆရာရယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ သိချင်တာလေးရှိလို့ပါဆရာ။ မနက်အိပ်ရာထရင် ရေတဖန်ခွက်ထဲ ဆော်ဒါလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်း၊ သံပုယိုသီးညှပ်ပြီး နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ဗိုက်ထဲကအဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်လို့ page တချို့မှာဖတ်ရပါတယ်။ ရက် ၂၀ သောက်ရင် ဗိုက်အဆီကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာ။ အဲလိုသောက်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီမညီ၊ ဆိုးကျိုး ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲသိချင်လို့ပါဆရာ။ ဆရာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ အသက်၂၇၊ မိန်းကလေး၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၈၀ ပေါင်၊ အဆီကျလို၍သောက်တာပါဆရာ။
ပိန်ချင်လို့မေးကြသူ မရေမတွက်နိုင်အောင် များပါတယ်။ နည်းတွေသိပေမဲ့ မလိုက်နိုင်လို့၊ အချိန်ယူတာကြာလို့ လူမပိန်သေးလဲ စိတ်မပိန်ပါနဲ့။ လှလို့ဝလို့ဆိုတာလည်း အလွန်နားဝင်ချိုလှတဲ့ နုတ်ခွန်းဆက် မဟုတ်ပါလား။ အမှန်က ဝရင် မ-ဟော်မုန်း များနေတယ်။ သူများနေရင် မျှခြေပျက်တော့ မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥထွက်တာကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတာမို့ ကလေးရမှာကို သက်ရောက်စေတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရပြီး မွေးတဲ့အခါလဲ သူများထက် ခက်သေးပြန်တယ်။
ငယ်ကတည်းက ဝတဲ့မိန်းကလေးတွေ အပျိုဖြစ်စောတယ်၊ ရာသီထိန်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဝတယ်လို့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ။ အရပ်နဲ့အလေးချိန်ဇယားနဲ့ တွက်တာအပြင် BMI ဆိုတာနဲ့လဲ တိကျအောင် တွက်သေးတယ်။ သူ့အလေးချိန်ရဲ့ ၃ဝ% က အဆီဖြစ်နေရင် အဝလွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ၅ ပေ ၁ လက္မ အမျိုးသမီးဆိုရင် ၁ဝ၅ ပေါင်နဲတယ်၊ ၁၂၂ သင့်တယ်၊ ၁၄ဝ ပေါင်များတယ်။
ဝလွန်းသူများ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ ဆီးချိုနဲ့ သွေးတိုး။ ဒီ ၃ မျိုးအပြင် အဝလွန်တာနဲ့ ကလေးမရနိုင်တာဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ သုတေသနတိုင်းက လက်ခံတယ်။ ဆေးတွေကို သိပ်အားမပေးပါ။ ပိန်ဆေးထဲမှာ လူသုံးများတာကတော့ Sibutramine ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ ကုဋေ ၂ဝဝ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေး ဈေးကွက်ထဲမှာ Meridia နာမည်နဲ့ ရောင်းနေပါတယ်။ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာတော့ ဒီဆေးကို ရောင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
အဆီတပေါင်ကျအောင် ကလိုရီ ၃၅ဝဝ ကို ပိုပြီးကုန်စေအာင် လုပ်ရမယ်။ မလွယ်ဘူးထင်နိုင်တယ်။ လိုတဲ့ခရီးရောက်ဘို့ ခြေတလှမ်းချင်းနဲ့သာ စရတာချည်းဘဲ။ တိကျချင်သူတွေအတွက် ရေးပါမယ်။
၃။ ကိုယ်စားနေသမျှ ကလိုရီတွက်ချပါ။ တပတ်စာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
၅။ Coke သောက်မဲ့အစား ရေတခွက်သာသောက်လိုက်ပါ။ ၉၇ ကလိုရီသက်သာစေတယ်။ ထောပတ်သုတ်မစားဘဲ ရှောင်တာ တဇွန်းကနေ ၁၈၅ ကလိုရီသသက်သာစေမယ်။ လှေကားအတက်အဆင်း ၁ဝ ခါလုပ်တာနဲ့ ၁ဝဝ ကုန်စေမယ်။ ၁ဝ မိနစ်အိပ်ရစောထပြီး လမ်းခဏလျှောက်တာ ၁ဝဝ ကုန်စေအုံးမယ်။ တီဗွီကြည့်ပြီး ၁ဝ မိနစ် ယောဂလုပ်ရင် ၅ဝ ကုန်မယ်။
၆။ လေ့ကျင့်ခန်းက ကိုယ်အလေးချိန်ချဘို့ ဒုတိယအရေးပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် တပတ်ကို မိနစ် ၂၅ဝ လုပ်ရမယ်။ မိနစ် ၅ဝ စီ ၅ ရက်။ စလုပ်တဲ့သူ တပါတ် ၃ ရက်ကနေစနိုင်တယ်။
RCT ဆေးကုသနည်းတွေရဲ့ ထိရောက်မှုကို စနစ်တကျ လေ့လာမှုပြုလို့ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်တွေအရ –
8. Dexfenfluramine = Likely to be ineffective or harmful ထိရောက်မှု မသေချာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
9. Fenfluramine = Likely to be ineffective or harmful ထိရောက်မှု မသေချာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
10. Fenfluramine + Phentermine = Likely to be ineffective or harmful ထိရောက်မှု မသေချာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
11. Phenylpropanolamine = Likely to be ineffective or harmful ထိရောက်မှု မသေချာ သို့မဟုတ် ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။
ဆေးဆိုရင်သာ သောက်လိုက်ပျောက်မယ်ထင်ကြတယ်။ ဆေးတွေမှာ သတိထားစရာတွေရှိတယ်။ တချို့ဆေးတွေမှာ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အမှားတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ပိန်ဆေးအများစုဟာ ပိုက်ဆံအတွက် ကြော်ငြာရောင်းတာဖြစ်တယ်။ မျိုးဗီဇအရဝသူတွေ ပြင်မရနိုင်။ အရပ်နည်းတွေ ပေါတယ်။ ဆေးသုတေသနမရှိကြပါ။ ဟော်မုန်းကြောင့် (ကိုယ်ဝန်၊ ကလေးမွေး၊ အသက်အရွယ်အပြောင်းအလဲ) အရ ဝသူတွေ ပြင်လို့မရသလောက်ခက်တယ်။ ပိုမတက်အောင်ထိန်းဘို့နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်များလို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ ကိုလက်စထောများတာတွေကို နေ့စဉ် ဆင်ခြင်နေဘို့လိုပါတယ်။
ကလိုရီများတာတွေ ငါးရက်လောက် လျော့စား၊ တနေ့ကို ငါးမိနစ်လောက် ချွေးထွက်အောင် လေ့ကျင်မှု တခုခုလုပ်ပြီး၊ ငါပိန်ရမယ်၊ ငါပိန်ရမယ်၊ဆိုပြီး တနေ့ ငါးခါ ရွတ်ပါ။ ငါးကျပ်သား မဟုတ်၊ ငါးပေါင် ကျရမယ်လို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချပါလေ။
ဝလွန်းသူတွေ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ ဆီးချိုနဲ့ သွေးတိုး၊ ဒီ ၃ မျိုးမရှိရင် ဝတာအတွက်တော့ မပူပါနဲ့။